Tonga tsy hita ny tsy hita - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Tonga tsy hita maso ilay tsy hita maso
Tamin'ny taon-dasa dia nisy ny fampirantiana momba ny mikrofotografika tao amin'ny seranam-piaramanidina Dulles izay natao manokana hanehoana ireo sela amin'ny fanaingoana 50.000 fotoana. Niseho ny sary miendrika rindrina, manomboka amin'ny volon'olona tsirairay ao an-tsofina anatiny, izay zava-dehibe amin'ny fahatsapana fifandanjalanjana, ireo faritra tsirairay ao amin'ny faritry ny atidoha, izay ahazoana ireo famantarana. Ny fampirantiana dia nanolotra fahitana tsy fahita firy sy tsara tarehy ho amin'ny tontolo tsy hita maso ary mampahatsiahy ahy ny ampahany manan-danja amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny maha-Kristiana: finoana.
Ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo isika dia mamaky fa ny finoana dia ny fahatokiana mafy ny zavatra antenain’ny olona iray, faharesen-dahatra amin’ny zava-misy tsy hita maso (Schlachter 2000). Sahala amin'ireo sary ireo, ny finoana dia mampiseho ny fihetsitsika manoloana ny zava-misy izay tsy ho takatry ny saina fotsiny. Ny finoana fa misy Andriamanitra dia avy amin’ny fihainoana ary lasa finoana mafy orina noho ny fanampian’ny Fanahy Masina. Ny zavatra rentsika momba ny toetran’Andriamanitra sy ny toetrany, izay hita ao amin’i Jesosy Kristy, dia mitarika antsika hametraka ny fitokiantsika aminy sy ny teny fikasany, na dia mbola miandry ny fahatanterahan’izany aza. Ny fitokiana an’Andriamanitra sy ny teniny dia mampiseho mazava tsara ny fitiavana azy. Miara-mitondra ny fanantenana ananantsika amin’ny fiandrianan’Andriamanitra isika, izay handresena ny ratsy rehetra amin’ny soa, hamafa ny ranomaso rehetra sy hanatsara ny zavatra rehetra.
Amin'ny lafiny iray, tokony ho fantatsika fa handohalika ny lohalika rehetra ary hiaiky ny lela rehetra fa Jesosy dia Tompo, amin'ny lafiny iray kosa fantatsika fa mbola tsy tonga ny fotoana. Tsy mbola nisy nahita anay ny Fanjakan'Andriamanitra ho avy. Noho izany, antenain'Andriamanitra hitana ny finoana amin'ny vanim-potoana tetezamita tavela: ny finoana na ny fahatokisana ny fampanantenany, amin'ny hatsarany, ny fahamarinany ary ny fitiavany antsika ho zanany. Amin’ny finoana no hankatoavantsika azy io ary amin’ny finoana no ahafahantsika mampiharihary ny fanjakan ’Andriamanitra tsy hita maso.
Amin'ny alàlan'ny fahatokiantsika ny fampanantenan'Andriamanitra ary amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fampianaran'i Kristy amin'ny alàlan'ny fahasoavana sy ny herin'ny Fanahy Masina, dia afaka manome fijoroana ho velona isika amin'ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra ho avy eto sy ankehitriny, amin'ny alàlan'ny asantsika, ny kabary ary ny fomba itiavantsika ny mpiara-belona.